मोडल के हो १ .० | अर्थव्यवस्था वित्त
एनकर्नी आर्कोया | 10/06/2021 08:04 | सामान्य अर्थव्यवस्था
स्रोत के हो १ is०: फैमिसेन्पर
जब तपाईं आर्थिक गतिविधि गर्नुहुन्छ, तपाईले गर्नु पर्ने प्रक्रियाहरू मध्ये एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत करको खातामा किस्त भुक्तान हो। यो मोडेल १ 130० को माध्यमबाट गरिन्छ। तर, मोडेल १ is० के हो?
यदि तपाइँले भर्खरै दर्ता गर्नुभयो भने, वा यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि १ form० के हो र कसरी यसलाई भर्ने भनेर जान्न चाहानुहुन्छ भने हामी तपाइँलाई यस प्रक्रियाको बारेमा जान्नु पर्ने सबै कुरा बताउनेछौं र सबैभन्दा ठूलो कुरा त ट्रेजरीको पालना कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामी तपाइँलाई भन्दैछौं। कुनै सजाय छ कि भनेर।
1 मोडेल। 130 ० के हो?
2 कसरी भर्ने
2.1 मोडेलमा चरणबद्ध कदम
स्रोत: कर एजेन्सी
मोडेल १ enc० ले समेट्छ जुन के हो "व्यक्तिहरूको लागि त्रैमासिक आयकर रिटर्न"। यो भुक्तानी हो जुन किस्तामा गरिन्छ (यो प्रत्येक तीन महिनामा भुक्तानी गरिन्छ) कुन भाग भुक्तानीको लागि जुन व्यक्तिगत आयकरबाट गर्नुपर्ने हो ट्रेजरीलाई भुक्तानी गरिन्छ।
अवश्य पनि, सबै व्यक्तिहरू त्यसो गर्न बाध्य छैनन्, केवल ती निम्न मामिलाहरूमा समावेश छन्:
जसले कृषि, पशुधन, वन र माछा मार्ने सहित आर्थिक गतिविधिहरू गर्छन्। अवश्य पनि, तिनीहरू प्रत्यक्ष अनुमान विधि स्थापना गर्नुपर्नेछ, या त सामान्य वा सरलीकृत।
कि उनीहरूले व्यावसायिक गतिविधिहरू गर्छन्। बाहेक यदि तपाईंको आयको income०% सँग पहिले नै खातामा एक होल्डिंग वा निक्षेप छ। यदि हो भने, तिनीहरूले फारम १ out० भर्न आवश्यक छैन।
यदि तिनीहरू नागरिक कम्पनीहरू र / वा सम्पत्तीको समुदायहरू हुन् भने। यस अवस्थामा, प्रत्येक पार्टनरले उनीहरूको सहभागितामा आधारमा भुक्तानी गर्नुपर्छ।
अब जब यो तपाईलाई प्रष्ट छ कि १ form० को रूप हो, तपाईले कसरी भर्ने भनेर थाहा पाउनु नै पर्छ ताकि यो ट्रेजरीको लागि राम्रो हो र तपाईको ध्यान आकर्षण गर्दैन। वा अझै नराम्रो, तिनीहरूले तपाइँमा एक स्वीकृति लागू गर्छन्।
तपाईंले यो याद राख्नु पर्छ कि, घोषणाकर्ता सेक्सनमा, तपाईले दुबै NIF र नाम र थर भर्नु पर्छ। त्यसो भए, अर्जित क्षेत्रमा यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईले कुन आर्थिक वर्षलाई जनाउनुहुन्छ र कुन त्रैमासिक अवधि।
शुद्ध फिर्ताको घोषणा गर्दा, तपाईंले यो ध्यानमा राख्नुपर्दछ कि यो जम्मा हुन्छ। त्यो हो, कल्पना गर्नुहोस् कि पहिलो क्वाटरमा तपाईंले नाफामा १०० युरो बनाउनुभएको छ। दोस्रो क्वाटरमा, तपाईंसँग २०० यूरो छ। जहाँसम्म, १ 100० फारम भर्दा, तपाईंले दोस्रो क्वाटरमा घोषणा गरेको आम्दानी दोस्रोको साथ थप्नु पर्छ। अर्को शब्दमा, यस अन्तिम त्रैमासिकमा यो २०० युरो नाफा हुने छैन, तर e०० युरो (पहिलो क्वाटरमा २०० + १००)।
खर्च पछि उस्तै हुन्छ, तपाईंले सबै क्वार्टरहरू थप्नु पर्छ, तपाईंको प्रगतिमा रहेको खर्चलाई विस्तार गर्दै।
सामान्य मा, मोडेल १० का तीन फरक सेक्सनहरू छन्।
सेक्सन I जहाँ आय र खर्चहरू राखिन्छन् र यो स्थापना हुन्छ आयबाट खर्च घटाउने २०% कत्ति छ। पछि, तपाईंले राख्नुभएको होल्डिings र साथमा तपाईंले अघिल्लो क्वार्टरबाट भुक्तानी गरेको लागू गरिएको छ र तपाईं परिणाम प्राप्त गर्नुहुन्छ।
सेक्सन II, जो कृषि, वानिकी, माछा मार्ने वा पशुधन गतिविधिमा लागेका छन्, जसले यस भागमा मोडेल भर्नु पर्छ।
Y सेक्सन III, जुन माथिको सबै सारांश हो जहाँ यसले हामीलाई अन्तिम आकृति दिन्छ, जुन भुक्तान गर्न वा क्षतिपूर्ति दिन सकिन्छ।
मोडेलमा चरणबद्ध कदम
स्रोत: कर सहायता
यसलाई स्पष्ट बनाउनको लागि, निम्न दिमागमा राख्नुहोस्:
बक्स १: त्यहाँ तपाइँले वर्षको लागि आय राख्नु पर्छ।
बक्स २: वर्षको लागि खर्च प्रविष्ट गर्नुहोस्।
बक्स:: यो स्वचालित हो, यसले के कमाई र खर्च घटाउँछ।
बाकस:: यसले तपाईलाई म्यानुअल तरीकाले हिसाब गर्न सोध्नेछ कि बक्स4को नतिजाको २०% कती हुन्छ, यदि यो नतीजा सकारात्मक भएको छ भने। नकारात्मक के हो? एउटा शून्य राख्नुहोस्।
बक्स:: यस स्थानमा तपाईंसँग दुई बाकस, and र १ of को योग हुनेछ। यी १ amounts० मोडेलहरू हुन् जुन तपाईं अघि प्रस्तुत गर्नुभयो। यदि, उदाहरणका लागि, यो बर्षको पहिलो हो, तपाईंले यहाँ केहि पनि राख्नुपर्दैन। तर हो दोस्रो त्रैमासिकबाट। यसैले यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंसँग माथिको कागजातहरू हातमा छन्।
बक्स In मा: तपाईंसँग लागू गरिएको वा तपाईंलाई लागू गरेको होल्डहोल्डिंगहरूको योग हुनेछ।
बक्स:: यो बक्स and र box बक्स from बाट अर्को घटाउ हो। अर्को शब्दमा। तपाईले के भुक्तानी गर्नुपर्नेछ (बक्स the) होल्डहोल्डिंग्सबाट कटौती गरिनेछ (from र)) जुन तपाईंको नाममा प्रविष्ट गरिसकिएको छ भनेर अनुमान लगाइएको छ।
यहाँ सम्म यो स्व-रोजगार भएका व्यक्ति वा आर्थिक गतिविधि भएका व्यक्तिको लागि हुनेछ। अब, यदि तपाइँ कृषि, पशुधन, माछा मार्ने वा वानिकीमा काम गर्नुहुन्छ भने, तपाइँले निम्न भर्नु पर्छ:
बक्स:: तपाईंले अनुदान, सहायता सहित, बर्षभरि आय प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ...
बक्स:: अघिल्लो बक्सको रकमको २% खर्चलाई ध्यानमा राखी बिना लागू गरिनेछ।
बक्स १०: तपाईंले बनाउनु भएको इनभ्वाइसहरूमा लागू गर्न रोकिएको होलडी राख्न प्रयोग गर्नुहुनेछ।
बाकस ११: यो एक हो जसले बक्स 11 र १० लाई घटाउछ, परिणाम दिँदै नकारात्मक वा सकारात्मक हुन सक्छ।
अन्ततः, भाग III सारांश हो, र सम्बन्धित बक्सहरू हुन्:
बाकस १२: जहाँ तपाईंले बक्स 12 र ११ लाई जोड दिनुभयो, फेरि यो सकरात्मक वा नकारात्मक मान हुन सक्छ।
बक्स १:: यस्तो कुरा जुन धेरैलाई थाहा हुँदैन त्यो त्यो हो, जब तपाईंको आम्दानी कम हुन्छ, ट्रेजरीले तपाईंलाई १०० यूरोसम्म कटौती गर्न अनुमति दिन्छ। सब भन्दा राम्रो कुरा यो हो कि तपाईं त्यो छुटै बक्सको बारेमा जानकारी खोज्नुहुन्छ जुन मूल्य छुट पाउन तपाईंले छुटमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ (यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने)।
बक्स १ 14 मा: त्यहाँ बक्स १२ र १ between बीचको भिन्नता हुनेछ। फेरि यो सकरात्मक वा नकारात्मक हुन सक्छ।
बक्स १ 15: नकारात्मक मान रेकर्ड गर्न प्रयोग गरियो। त्यो हो, यदि तपाईले १ box बक्समा नकरात्मक नतिजा प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईले त्यसलाई स indicate्केत गर्नुपर्दछ, थप रूपमा तपाईले यो पनि ध्यानमा राख्नु पर्छ कि यस बक्सको मान १ 19 भन्दा बढी हुन सक्दैन।
बक्स १ 16: यदि बाकस १ 14 तपाईंको लागि सकारात्मक भएको छ र तपाईंले आफ्नो घर किनेको छ वा पुनःस्थापनाको लागि loanण पनि तिर्नुहुन्छ भने तपाईं ती खर्चहरू यहाँ घटाउन सक्नुहुन्छ। तपाई कति कटौती गर्न सक्नुहुन्छ? ठीक छ, बक्स in मा राशि (वा you यदि तपाईं कृषि, पशु गतिविधिहरू ...)। त्यो यदि, सीमा3यूरो लगाइएको छ।
बाकस १:: यो सजिलो छ, बक्स १ 17 र १ sub लाई घटाउने परिणाम।
बाकस १:: तपाईंले मात्र भर्नु पर्छ यदि त्यहाँ पूरक घोषणा छ भने। अन्यथा, यो शून्य वा खाली रहन्छ।
बाकस १:: अन्तमा, यो बक्सले १ and र १t लाई घटाउँछ, परिणाम दिन्छ जुन मोडेल १ 19० को हो। यदि यो सकारात्मक छ भने, तपाइँले तिर्नुपर्नेछ; र यदि यो नकरात्मक हो भने, तपाईले बर्षको तलका मोडेलहरूसँग क्षतिपूर्ति दिन सक्नुहुनेछ (तपाईले उनीहरूलाई जेसैले भुक्तानी गर्नुभयो फर्काउन पनि सक्नुहुन्छ)।
यस तरीकाले तपाईसँग एक गाईड छ र अझ राम्ररी बुझ्न सकिन्छ कि १ model० को मॉडल के हो र कसरी यसलाई भर्ने भनेर सबै कुरा सहि छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » मोडेल। 130 ० के हो?